Ngingumsebenzisi we-Airbnb, ngiwasebenzisa kanjani amalungelo ami okuqoqwa, okugcinwa nawokuproseswa kwemininingwane? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ukulawula i-akhawunti yakho – isihloko sosizo
Ukuvala noma ukususa – isihloko sosizo
Ngingumsebenzisi we-Airbnb, ngiwasebenzisa kanjani amalungelo ami okuqoqwa, okugcinwa nawokuproseswa kwemininingwane? – isihloko sosizo
Ngingumsebenzisi we-Airbnb, ngiwasebenzisa kanjani amalungelo ami okuqoqwa, okugcinwa nawokuproseswa kwemininingwane?
Ukuvala noma ukudilitha i-akhawunti yakho
Ungavala i-akhawunti yakho okwesikhashana bese uyivula kamuva, noma ungayisusa unomphela.
Ingabe i-Airbnb ingakwazi ukuvala i-akhawunti yami?
Yebo. Funda ukuthi kungani futhi kunini lapho i-Airbnb ingase ibeke umkhawulo, imise okwesikhashana, noma ivale i-akhawunti yakho.
Hlela amasethingi akho e-akhawunti
Ungahlela amasethingi e-akhawunti yakho, kanye neminye imininingwane ephrofayilini yakho yomphakathi, kusuka engxenyeni yakho ye-Akhawunti.